Muqdisho: Wasaaradda Warxbarashada iyo Dalladaha oo ka heshiiyey Imtixaanka Fasalka 12-aad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Wasaaradda Warxbarashada iyo Dalladaha oo ka heshiiyey Imtixaanka Fasalka 12-aad
1st May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo dalladaha Waxbarashada dalka ayaa heshiis ka gaaray qaabka ay u wada shaqeynayaan, iyadoo bilihii lasoo dhaafay khilaaf ka jiray arrintaas, islamarkaana dugsiyo iyo arday badan u dhegtaayeen natiijada soo bixin doonta.
Kulan shalay Muqdisho ku dhexmaray wasaaradda waxbarashada iyo wakiilo ka kala socday 14 dalladood ayaa sidoo kale looga heshiiyey muran ka jiray cidda dhamaadka bishaan May qaadeysa imtixaanka faslalka ugu dambeeya dugsiga sare ee 12-aad, kaasoo wasaaraddu dooneysay iney qaado, halka inta badan dalladugu diideen.
Xoghayaha gudigga Imtixaanaadka Qaranka, Cabdirisaaq Axmed Sheekh ayaa goobta ka akhriyay qodobada lagu heshiiyay oo ay ka mid ahayd in Wasaaradda Waxbarashada ay diyaarindoonto imtixaanaadka Waxbarasho ee fasalka 12-aad, sanad dugsiyeedka 2014 -2015 oo ah sanadka dameb.
Sida qodobkaas ka muuqata, wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ma diyaarin doonto imtixaanka fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2013-14 oo la qorsheeyey in la galo dhamaadka bishan May oo socota.
Waxaa sidoo kale, heshiiska ka mid ah in waajibaadka wasaaradda ay ka mid tahay diyaarinta manhaj mideysan iyo kormeeridda sida uu u sahqeeyo.
Sidoo kae, wasaaradda waxbarasahda Soomaaliya iyo dalladaha ayaa ku heshiiyey in wasaaraddu bixin doonto hadda kadib dhamaan heerarka kala duwan shahaadooyinka, iyadoo wasaaraddu horay u bixin shahaadada dugsiga sare.
Guddoomiyaha gudigga Farsamada ee Midowga Dalladaha Cali Maxamed Abuukar Cali Kaabsole oo ku hadlayay magaca dalladaha Waxbarashada oo gaarayey 14, ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin qorshaha wasaaradda.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Ciise Maxamed Axmed Guraase oo kulanka soo gabo gabeeyay ayaa Dalladaha Waxbarasho uga mahadceliyay doorkii ay ka soo qaateen horumarinta waxbarashada dalka, intii lagu guda jiray bur burka, waxaana uu sheegay in Wasaaraddu ay door muhiim ah ka qaadan doonto sidii Manaahijta Waxbarashada dalka loo mideyn lahaa.
Wasaaradda waxbarashada ayaa dooneysay iney diyaariso imtixaanka fasalka 12-aad, hase ahaatee waxaa diiday dhamaana dalladaha waxbarashada marka laga reebo dalladda FPENS oo ah dallada ugu weyn ee ka howlgasha Soomaaliya. Waxaana heshiiska hadda ka muuqata in wasaaraddu u tanaasushay dalladihii diiday go’aankeeda.
Human Rights Watch: Dhaqanka ciidanka Kenya wuxuu dhiirigelinayaa ku nabadda diidan
Somalia may requests exoneration of international debt